सासुको निधन भएपछि किरिया बसेकी पार्वतीको यसरि मृत्यु, केहि दिनमै जब रहस्य खुल्यो गाउँलेहरूले उठाए आवाज (भिडियो) – Classic Khabar
June 2, 2021 194
श्रीमान श्रीमतीको राम्रो सम्बन्ध थिएन । श्रीमानले आफ्नै मामाको छोरी बहिनीलाई सौता ल्याएका थिए । उनी आफ्नो सुर गरेर एक्लै बसेकी थिइन् । भरतपुर ६ मा भएको एउटा घटना भएको छ । दुई दिन अघि सासुको निधन भएपछि पार्वती भट्टराई किरिया बसेकी थिइन् । उनको त्यही बेलामा ज लेर निधन भएको छ । तर पार्वतीका माइतीले भने रहस्यमय भएको बताएका छन् ।
Prevउनको श्रीमती तपाई हो र ? यिनलाई भेट्न अर्की युवती आउने गरेकी छन् ति को हुन् ? (भिडियो)